Beeraha baradhada ee gobolka Novosibirsk - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Mikhail Tremasov, Wakiilka gobolka ee Siberia Federal District iyo Bariga Fog, LLC "GRIMME-RUS"
In kasta oo ay jiraan xaalado cimilo xumo, wax soo saarka dalagyada ayaa si wanaagsan looga soo saaray gobolka Novosibirsk. Meelaha ugu muhiimsan ee gobolka waxaa loo qoondeeyay soo saarista dalagyada miraha, laakiin baradhada ayaa sidoo kale heshay booskooda.
Dhaqankani wuxuu ku koray daar kasta oo miyi ah In ka badan toban shirkado beeraha ayaa ku hawlan wax soo saarka warshadaha ee baradhada. Ku guuleysiga natiijooyinka sare waxaa fududeeyey adeegsiga teknoolojiyad casri ah iyo qalab casri ah oo ay bixiyeen labada shirkadood ee wax soo saarayaasha gudaha iyo la-hawlgalayaasha shisheeye ee ka kala yimid dalalka Yurub iyo Ameerika
Waa in la ogaadaa in labadii sano ee la soo dhaafay xaalada suuqa aysan wali u rooneyn soo saarayaasha baradhada. Qiimaha alaabtu waa heer aad u hooseeya, kharashka kaydinta ayaa sii kordhaya, iyo kanaalka qaybinta dhaqameed ee jamhuuriyadaha Aasiyada dhexe ficil ahaan ma shaqeeyaan. Ka soo horjeedka taariikhdan, shirkado badan oo beeraha ah waxay bilaabeen inay yareeyaan aagga beerashada, ama xitaa gebi ahaanba soosaarka wax soo saarka.
Kuwa ugu horreeya ee la garaaco waxay ahaayeen beero yaryar, iyo sidoo kale kuwa lahaa takhasus yar. Waxaa kugu filan in la yiraahdo sannadkan baradhada lama beeran ilaa dhowaan beerta baradhada ee ugu weyn gobolka - JSC "Yemelyanovskiy"beerashada in ka badan 500 oo hektar.
Way adag tahay in laga hadlo rajooyinka: mug aad u tiro badan oo baradho ah oo laga soo saaray gobolka ayaa leh tayo hoose (natiijada ka dhalan la'aanta tiknoolajiyada beeraha, adeegsiga qalab casri ah oo aan buuxin shuruudaha casriga ah).
Boqolkiiba in yar oo ka mid ah waxsoosaarka ayaa loo helaa ka baaraandegidda, taas oo sidoo kale aan wax ku kordhin doonin kororka qiimaha wax soo saarka. Laakiin soo saarayaasha beeraha waxay rajo weyn ka qabaan imaatinka PepsiCo ee gobolka Novosibirsk.
Bishii Febraayo 15, 2019 ee Sochi, intii lagu jiray Madasha Maalgashiga Ruushka, Guddoomiyaha Gobolka Novosibirsk Andrey Travnikov iyo Madaxweynaha PepsiCo ee Ruushka, Belarus, Ukraine, Caucasus iyo Bartamaha Aasiya, Neil Starrock, waxay saxiixeen heshiis ku saabsan dhismaha warshad fudud oo laga sameeyo Novosibirsk.
Hawsha cusubi waxay soo saari doontaa Chips-brand-brand. Waxaan ka hadleynaa howsha 250300 milyan oo tan oo baradho ah, taas oo, sida ay sheegeen soo saarayaasha beeraha maxalliga ah, ay si weyn u saameyn karto dhaqaalaha shirkadaha, horumarka farsamo ee sii kordhaya ee beeraha iyo, laga yaabee, inay dib ugu laabato warshadaha kuwa ka tanaasulay wax soo saarka baradhada.
Maanta beerta lambar 1 ee wax soo saarka baradhada ee gobolka Novosibirsk si sax ah ayaa loogu yeeri karaa SPH "Yarkovskoe". Mawqifka xasiloon ee beerta waxaa lagu hubiyaa shaqada si wanaagsan oo isku-dubaridan ee kooxda oo dhan, oo uu hoggaaminayo hogamiyaha ganacsiga hibada leh Gleb Alexandrovich Popovtsev.
"Yarkovskoye" wuxuu leeyahay 10 hektar oo aagag lagu beeray, halkaasoo 000 hektar loo qoondeeyay baradhada. Hababka beeraha ee horumarsan iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda casriga ahi waxay kuu oggolaanayaan inaad hesho dalag hodan ah oo tayo sare leh. Baradhadu waxay ku keydsan tahay meel kayd ah oo dhowaan la dhisay oo lagu qalabeeyay tiknoolajiyaddii ugu dambeysay, iyo kharashyada sanadlaha ah ee mashiinnada beeraha iyo qalabka qaddarka tobanaan milyan oo rubi ay beerta ku jiraan waxaa loogu yeeraa maalgashiga mustaqbalka shirkadda.
Sida laga soo xigtay agaasimaha fulinta ee beerta, Vladimir Robertovich Koenig, SPH "Yarkovskoe" sidoo kale waxay kordhinayaan soosaarka khudaarta - karootada, basasha iyo kaabajka, maxaa yeelay dadka ka shaqeeya shirkadu way yaqaanaan sida loo beero alaab tayo sare leh oo suuqa looga baahan yahay.
Meel muhiim ah soo saarista khudaarta ee gobolka Novosibirsk waa LLC "OPKH" DARY ORDYNSKA "kaas oo baradhada, karootada iyo xididdo lagu beero aag dhan 300 hektar. Madaxa shirkadda, Shakir Suleymanov, waa qof furfuran, aad u wanaagsan oo niyad wanaag leh, soona dhaweyn kara. Wax soo saarka shirkadan marwalba waxaa laga heli karaa khaanadaha dukaamada silsiladda Novosibirsk.
Beer kale oo khudaarta ka baxda ayaa ku taal meel aad ugu dhow magaalada sayniska ee Koltsovo - LLC "Jardiinooyinka Giant". Muddo dheer waxaa madax ka ahaa Elena Nikolaevna Polupanova. Takhasuska ugu weyn ee shirkaddu waa soo saarista khudradda aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sidoo kale beerta waxay beerataa baradho (aag dhan 130 ha) waxayna soo saartaa dabacase (40 ha). Alaabada waxaa la siiyaa silsiladaha tafaariiqda ee Novosibirsk iyo magaalooyinkeeda dayax gacmeedka.
Astaamo gaar ah oo ka mid ah Giganta Gardens LLC waa dhul si wanaagsan loo xardhay oo amarka aan caadiga ahayn ka taliyo. Mid ayaa hela aragti ah in dhammaan geeddi-socodka shaqada ee beerta ay si fiican u khaldan yihiin wax walbana ay ku socdaan qorshe muddo dheer la qorsheeyey.
Aagga tuulada Priobsky, wuxuu khudaar ku beerayay dhul furan oo xiran muddo ka badan 20 sano Priobskoye CJSC... Agaasimaha shirkada waa Viktor Petrovich Becker.
In ka badan shan kun oo tan oo khudrad cusub ah ayaa halkan lagu soo saaraa sannad kasta. Wax soo saarka koray waxaa loo iibiyaa kuwa jumlada iibiya, oo lasiiyaa hay'adaha dowladda, qaarna waxaa la siiyaa dukaamada silsiladaha tafaariiqda ee Novosibirsk.
Beertu waxay leedahay beero u gaar ah oo lagu waraabiyo, aqalka dhirta lagu koriyo, mashiinada beeraha ee casriga ah, raxan gawaari ah, bakhaarro, bakhaarro khudaar lagu iibiyo, oo leh qalab cimilo casri ah Waxaas oo dhami waxay xaqiijinayaan meertada wax soo saar buuxa: koritaanka, kaydinta, rarka iyo keenista alaabada.
Priobskoye CJSC waxaa la gudoonsiiyay dibloomaasiyiin iyo bilado fara badan oo lagu qabtay carwooyinka, tartamada iyo carwooyinka. Shirkaddu waxay sameysaa dadaal kasta oo lagu wanaajinayo waxtarka shaqaalaha iyo tartanka suuqa, waxay ka shaqeysaa sidii loo kordhin lahaa mugga wax soo saarka si loo daboolo baahida sii kordheysa ee bulshada ee loogu talagalay wax soo saarka khudradda cusub. Hawsha ugu weyni waa in la caddeeyo kalsoonida macaamiisha.
Sheekada ku saabsan shirkadaha baradhada ka baxa ee gobolka Novosibirsk waa la sii wadi karaa, laakiin, nasiib daro, beeraleyda qaar waxay lumiyeen xiisihii ay u qabeen dhaqanka waxayna yareeyaan wax soo saarka baradhada.
Tusaale ahaan, gudaha KFH "Leonidov" sanadkan, aagga wax soo saarka beeraha ayaa laga dhigay 200 hektar oo laga dhigay 120 hektar. Sababaha ayaa ah qiimaha hooseeya ee alaabada dhowr xilli iyo dhibaatooyinka suuqgeynta dalagga. Laakiin waxaa jira rajo ah in xaaladda hadda jirta ay tahay dhacdo ku meel gaar ah, khibraddii ay ka heshay shirkaddu wali waxay noqon doontaa mid dalab leh.
Beeralayda baradhada Siberia waxay filayaan in sanadka 2021-ka uu yahay sanad biyo fadhiisin u ah gobolka, baradhada ayaa markale noqon doonta dalag faa iido badan leh. Filashooyinkani waxay ugu horreyn la xiriiraan dhismaha iyo soosaarida warshaddii jiiska baradhada ee PepsiCo. Hawlgalku waa inuu ka caawiyaa warshadaha baradhada inay sii noolaadaan.
Tags: 2020 .3Beeraha baradhadaGobolka Novosibirsk
Goynta baradhada ayaa ka socota gobolka Kostroma
Qiimaha beertada ee gobolka Novosibirsk wuxuu kordhi doonaa 33%
Bandhigga caalamiga ah ee warshadaha beeraha "Siberian Agrarian Week" waxaa lagu qaban doonaa 10 ilaa 12 Noofambar 2021 gobolka Novosibirsk
Shaqooyinka goosashada ayaa ka socda gobolka Ryazan